प्रिटी जिन्टाले मेनुकाको गरिन प्रशंसा , टप १३ मा छनौट हुन सफल हेर्नुहोस भिडियो सहित.... - Everest Media News
Home मनोरञ्जन प्रिटी जिन्टाले मेनुकाको गरिन प्रशंसा , टप १३ मा छनौट हुन सफल हेर्नुहोस भिडियो सहित….
नेपाली रियालिटी शो नेपाल आइडलमार्फत सबै नेपालीको मन जितेकी गायिका मेनुका पौडेल सारेगमप टप १३ मा छनौट हुन सफल भएकीछिन् । हिजो प्रसारण भएको कार्यक्रममा उनले फिल्म खुबसुरतको ‘पिया बाबरी’ बोलको गीत गाएकी थिईन् । उनको स्वरको हामी सबैले मुत्तकण्ठले प्रशंसा गछौँ तर गएको हप्तामा भन्दा मेनुकाले हिजोको प्रस्तुतीमा सुरुवाती दिनको जस्तै आर्कषक र बलियो प्रस्तुती दिएकी थिईन् ।
उनले गीत गाउँदा सधै जस्तै जज र जुरी मेम्बरहरुले यस पटकपनि सबै जज तथा जुरी मेम्बरबाट स्ट्याण्डिङ ओभिसन दिँदै प्रशंसा गरेका थिए भने जुरी मेम्बरले ९९.३ प्रतिशत अंक दिएका थिए । अतिथी जजको रुपमा उपस्थित भएकी नायिका प्रिटी जिन्टाले मेनुकाको आवाजको प्रशंसा गर्दे भनिन् “तपाईको आवाजमा जुन सुर छ इमोसन छ त्यो निकै प्योर छ” ।
मेनुका चर्चित संगितकार शेखर रबजानीयाको टिममा रहेकीछिन्। सधै जस्तै शेखरले पनि मेनुकाको प्रशंसा नै गरे भने अर्का चर्चित संगितकार वाजिद खानले उनको प्रशंसा गर्दै भने, ‘तपाईंले निकै सुन्दर तरिकाले यो गीत गाउनुभयो । तबलाको बोल, सरगम निकै राम्रो थियो, डायनामिक्स कमालको थियो । समग्रमा तपाईंको प्रस्तुती निकै शानदार थियो । ’
साथै कार्यक्रम सञ्चालकको रुपमा रहेका आदित्य नारायण झाले स्टेजमा मेनुकासंग नेपाली बोल्दै रमाईलो गरे । मेनुकाजी, एकदमै राम्रो लाग्यो ।’ उनले मेनुकालाई नेपाली भाषामै प्रश्न पनि सोधे, ‘तपाईंलाई सारेगमपमा आएर कस्तो लागेको छ ? ’जवाफमा मेनुका भन्छिन्, ‘मलाई एकदम खुसी लागेको छ ।’
नेपाल आइडलबाट अपेक्षितरुपमा बाहिरीएकी उनले त्यसपछि पनि आफनो सांगेतिक प्रस्तुतीलाई रोकिनन् । त्यस समयता उनले पाश्र्व गायनसंगै केही सुमग गीतहरु गाईन् । सुमधुर स्वर, नम्र अनि मिजासिलो बोली, संगीत प्रतिको लगाव मेनुकाका व्यक्तित्व हो । एक मन्दिरमा भजन गाउँदै गरेको अवस्थामा उनको स्वरबाट प्रभावित भई काठमाडौँमा स्थाई बासिन्दा रहेका एक परिवारले उनलाई धर्म छोरी बनाएर राखेका छन् ।
उनै धर्म आमा बाबुको साथ सहयोग नै उनको साङ्गीतिक यात्रा अगाडी बढ्ने माध्यम बन्यो । उनले छोटो समयमा पाएको चर्चाले उनको शारीरिक अशक्ततालाई बिर्साएको थियो । सांगेतिक क्षेत्रमा केही गर्ने सोचका साथ लागि परेकी उनी भारतकै चर्चित गायन रियालिटी शो सारेगामापा मा अडिसन राउण्डबाट सेलेक्ट भएकी थिईन् ।
नेपालमा पहिलो पटक सारेगामापा को अडिसन भएको थियो जसबाट उनी चुनिएकी थिईन् । अब हेरौँ जन्मिदै दृष्टीबिहिन रहेकी मेनुकाको अवको सांगेतिक यात्रा कहाँसम्म पुग्छ ।नेपाल आइडलमार्फत सबै नेपालीको मन जितेकी गायिका मेनुका पौडेलको सुमधुर आवाजले यतिबेला भारतीय मिडियामा चर्चा कमाईरहदा सम्पुर्ण नेपालीहरु गर्वले खुसी छन् ।